China Methanol ire ere ka Hydrogen Nrụpụta na Factory | Binuo
Methanol mebiri emebi na hydrogen
Methanol ire ere
N'okpuru ụfọdụ okpomọkụ na nrụgide, methanol na uzuoku na-enweta mmeghachi omume mgbawa methanol yana mmeghachi omume ngbanwe carbon monoxide iji mepụta hydrogen na carbon dioxide na ihe mkpali. Nke a bụ usoro mmeghachi omume catalytic siri ike nke nwere ọtụtụ ihe na ọtụtụ mmeghachi omume, yana nha kemịkalụ bụ nke a:
A na-ekewa hydrogen na carbon dioxide nke emepụtara site na mmeghachi omume ngbanwe site na nrụgide swing adsorption (PSA) iji nweta hydrogen dị oke ọcha.
Ụkpụrụ nke Methanol Decomposition
A na-agwakọta methanol na mmiri desalted n'otu akụkụ, ma ziga ya na ụlọ elu vaporization mgbe ikpochasị ọkụ site na onye na-ekpo ọkụ ọkụ. Uzuoku mmiri methanol nke vaporized na-abanye n'ime reactor mgbe nnukwu ikpo ọkụ na onye na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, wee na-eme mgbawa catalytic na mmeghachi omume ntụgharị n'ime akwa akwa iji mepụta gas na-agbawa nke nwere ihe dịka 74% hydrogen na 24% carbon dioxide. Mgbe mgbanwe okpomọkụ, jụrụ na condensation, ọ na-abanye na mmiri na-asacha ụlọ elu absorption, ụlọ elu na-anakọta methanol na-adịghị agbanwe agbanwe na mmiri maka imegharị ihe, na-eziga gas ngwaahịa na PSA ngwaọrụ maka ịdị ọcha.
PSA dị ọcha / Mmepụta Hydrogen PSA
Mmepụta hydrogen PSA na-ewere gas agwakọta nke nwere hydrogen dị ka akụrụngwa, dị ka ụkpụrụ nke nrụgide swing adsorption si dị, ọdịiche nke ike adsorption na elu nke molecular sieve na ọnụego mgbasa nke hydrogen, nitrogen, CO2, CO na gas ndị ọzọ. nweta usoro nke mgbasa ozi na-arụ ọrụ na-eme ka ọ ghara ikpochapụ iji mechaa nkewa nke hydrogen na gas ndị ọzọ iji nweta hydrogen na ịdị ọcha achọrọ. Usoro niile na-eji sieves molekụla pụrụ iche na njikwa mmemme.
Eserese Usoro Usoro
Ịdị ọcha hydrogen
Ọnụego ikuku hydrogen
Usoro Ntugharị nke Methanol Decomposition
Akụkụ nke Methanol Decomposition
☆ Methanol uzuoku na-agbawa ma gbanwee n'otu nzọụkwụ na ihe mkpali pụrụ iche.
☆ Ọrụ nrụgide na-ebelata oriri ike, nke pụtara na enwere ike izipu gas ntụgharị nke emepụtara na nkewa mgbasa ozi nrụgide na-enweghị nrụgide ọzọ.
☆ Njiri mara nke ihe mkpali pụrụ iche gụnyere ọrụ dị elu, nhọrọ dị mma, obere ọrụ okpomọkụ na ogologo ndụ ọrụ.
☆ Iji mmanụ na-ebufe ọkụ dị ka onye na-ebufe ọkụ na-ekesa iji mejuo usoro achọrọ ma belata ụgwọ ọrụ.
☆ Full atụle recycling nke usoro ike, nke mere na mmeghachi omume okpomọkụ na mkpokọta ọrụ ike oriri na-eri bụ ala.
☆ Akụrụngwa na-arụ ọrụ na-akpaghị aka ma nwee ike ileghara ya anya na usoro dum.
☆ Ịdị ọcha nke gas ngwaahịa dị elu ma nwee ike gbanwee na 99.0 ~ 99.999% dabere na ihe ndị ahịa chọrọ.
☆ Iji adsorbent pụrụ iche nwere ọmarịcha arụmọrụ.
☆ Iji pneumatic pụrụ iche mmemme akara valvụ nke mgbochi scour na azuokokoosisi akara onwe ụgwọ ụdị.
Nke gara aga: VPSA Oxygen Generator
Osote: Amonia nbibi na hydrogen
Ụlọ ọrụ na-emepụta hydrogen
Hydrogen na Oxygen Generator
Igwe na-ekpo ọkụ hydrogen
Igwe ọkụ eletriki hydrogen
Hydrogen Maka mmepụta ike
Ọdụdọ mmanụ ụgbọala
Ụlọ ọrụ mmepụta hydrogen
Igwe Ọgbọ Mmiri Hydrogen
Teknụzụ Ọgbọ Hydrogen
Igwe na-ebu hydrogen maka ire ere
Oxygen Generator adịghị etinye ya
Ọnụ ego Generator Hydrogen
Onye na-emepụta hydrogen
Ọkpụkpụ Oxygen Generator
Ọgbọ ike hydrogen
Igwe na-ebu hydrogen
Igwe ọkụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Amonia nbibi na hydrogen
Ọgbọ ike hydrogen, Hydrogen na Oxygen Generator, Holtec Nitrogen Generator, Psa Nitrogen, Atlas Copco Ngp, Psa Nitrogen osisi,